Atụmatụ Semalt Na Ịmepụta Ndepụta Email na Ịmalite Site na Ịntanetị Ịntanetị
Inwe ndepụta email ga-enye gị ohere ịmalite ịme ego. Ihe niileọ na-ewe bụ otu email na-akwado ngwaahịa ọhụrụ ị na-akwalite, ị nwere ike ịnweụbọchị ezumike buru oke, ma ọ bụrụ na ị jisiri ike ịmepụta nnukwu ndepụta. Ọkachamara ọkachamara Ntanetị,Michael Brown na-enye ndụmọdụ bara uru banyere otu esi amalite site n'ịntanetị.
Cheedị na ị nwetara ihe ọmụma banyere ihe ọhụrụ ahụngwaahịa, nke ịchọta uru ma nyere aka. Ozi dị mfe e zigara na ndepụta nke mmadụ 10,000 na aọnụ ọgụgụ mkparịta ụka nke 5% ga-eweta ahịa 500. Na-eche na ị na-enweta ọrụ $ 10 maka ire ere,nke bụ atụmatụ a na-agbanwe agbanwe, nke a ga-akpata gị $ 5,000 n'otu ụbọchị, n'ihi na ihe na-erughịotu awa nke ọrụ. Enweghị obi ike maka ịmepụta listi email?
Dị ka o kwesịrị ịdị, listi email nke 10,000 bụ ụda nhandepụta, nke ga-ewe ọnwa ole na ole iji wuo, n'ihi ya, ị ga-amalite ịrụ ọrụ na ya taa, ọ bụghị echi. Nangwa ngwa ịmalite ịmepụta listi gị, ngwa ngwa ị ga-anọdụ ala azụ, zipụ ozi email maka ihe ọhụrụngwaahịa, ma nwetakwuo oge awa karịa ka ị ga - eme otu ọnwa.
Uru nke Ndepụta Email
Ịdị na-arụ ọrụ nke ọma
Ikike nyochaa clicksna stats ndị ọzọ dị mkpa nke na - enyere gị aka ịme atụmatụ atụmatụ email gị
Ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ma na-atụkwasị obi site n'ịnye ọnụ ahịa karịa oge
Mgbanwe dị elu karịaịkwalite nkwurịta okwu na-aga n'ihu na ndepụta email gị
Otu n'ime akụkụ kachasị mkpa nke iwuli emailndepụta na-edebe ndị debanyere aha gị. Ọ bụ ihe na-emekarị ka ndị na - agụ akwụkwọ na - agụ akwụkwọ na -wee wepụ onwe ha site na listi email gị mgbe nke a gasịrị. Ikwesiri inwe ike inye ha urumgbe niile na mgbanwe email gị, ma ọ bụghị ya, kwuo ezi obi maka ọrụ siri ike gị na uru ị ga - eme n'ọdịnihu.
Mgbasa ozi ahia ahia nke oma bu ihe nileụzọ ziri ezi. Chee ozi niile ị na-enweta kwa ụbọchị na ihe mere ụfọdụ n'ime ha ji jide gịelere anya na ndị ọzọ. E nwere sayensị na ịchọta ndị debanyere aha mmasị ma tụkwasị obi site naemail dị mfe. Nke a bụ ọdịiche dị n'etiti "spam" ị nwetara na ozi ịntanetị ị pịa ka ị chọtakwuo banyere ya.
Isi ihe dị iche iche iji cheta mgbe ị na-edepụta aha gị
Mepụta ntukwasi obi site n'inye nka na uru na niche gi
Na-akpali mmetụta haemepụta akụkọ ndị na - agụ akwụkwọ na - achọpụta mmasị
Weghachite akụkọ gị na ezi uche dịkannwale iji mee ka ha nwekwuo mmasị
Ọ dị oke nkpa ịgwa ndị debanyere aha gị okwu.Ị maara ihe mere ha ji debanye aka, yabụ gwa ha okwu n'ụzọ ga-adọrọ mmasị ha. Ọ dịghị onye nwere mmasị na emailekwu okwu banyere ihe ndị na-adịghị mkpa, ya mere, gakwuru n'isi gị ngwa ngwa na ozugbo. Gwa ha akụkọ hanwere ike imetụta. Nke a ga - eme ka mmetụta uche bịa n'elu, nke bụ kpọmkwem ihe ị na - achọ.
Ụzọ kachasị mma isi wuo listi email bụ iji otuonye na-arụ ọrụ na akpaaka. Ị nwere ike ịtọ ozi ịntanetị na akpaghị aka n'ime oge ole na ole n'ime ọdịnihu, ma ozugbo emere,ị ghaghị ime ihe ọ bụla. E nwere ọtụtụ nhọrọ, ma Aweber yiri ka ọ bụ ihe kachasị mma. Ebe ahụbụ ihe na-akpali mmasị ịchọta nbudata ma ọ bụ dị ọnụ ala ma ọ bụ dị ọnụ ala kama nsogbu ahụ na nke ahụ bụ ozi ịntanetị gịotu kwa izu, ma ọ bụ ha ga-ejedebe na igbe ọfụma spam gị.
Isiokwu ederede Email ga-abụ ihe a na-apụghị imeri emerima nweta mma nke onye ọ bụla. Ịkọ akụkọ dị mkpa iji jide uche ha ma nweta ha na isiokwu gịnke iche echiche. Ịmatakwu banyere copywriting ga - enyere gị aka ịmepụta ozi ịntanetị bara uru nke ndị na - edebanye aha gị na - agụ ma na - achọ.
Cheta iji wuo ntụkwasị obi site na listi email gi tupuị na-amalite ịtọpụta ngwaahịa na ịchọ ahịa. Ikike sitere n'aka obi ike, nke a bụ ihe na-enye gị ohere ịme ahịa n'ọdịnihu.
Jide n'aka na ị gwara onye na-agụ ihe ị ga-eme. Ọnwere ike iyi ihe mgbagwoju anya, mana omumu egosiwo na igwa mmadu ime ihe kaririarịọ ha ka ha mee ihe. "Nbanye ugbu a maka nhazi 1-na-1" ga-arụsi ọrụ ike karịa "Ị ga - achọ ịbanye maka nhazi 1-na-1?"
Olileanya, isiokwu a ga-enyere gị aka ịmụta aihe ma ọ bụ abụọ maka ịmepụta listi email. Ihe kachasị mkpa ịmara bụ na ị gaghị echere ịmalite. Ọ bụdị oke mkpa ka ị malite ọrụ a ozugbo. Ọ bụrụ na ị nwere oge ọ bụla, gaa na Ụlọ elu Ọrụ Ntanetịya mere anyị ga-eme ka ihe doo anya maka gị Source .